Adeeggii Robotaxi ee ugu Horreeyey ee Yurub ah oo Laga Bilaabo Dalka Holland
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Adeeggii ugu horreeyay ee iskiis u shaqeynaya ee Yurub ee Robotaxi ayaa laga bilaabay Nederland
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Wararka Nederland • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Adeeggii ugu horreeyay ee iskiis u shaqeynaya ee Yurub ee Robotaxi ayaa laga bilaabay Nederland
Adeeggii robotaxi -ga ee ugu horreeyey ee Yurub oo si buuxda u madax -bannaan ayaa laga bilaabay Netherlands
Robotaxi waa dooni koronto oo iskeed u shaqaysa oo ku shaqaysa qorraxda waxaana lagu ammaani karaa app-ka wadista.
Automation -ka Buffalo ee Mareykanka ayaa si aamusnaan leh u daah -furay adeegga robotaxi -ga ganacsiga ee ugu horreeya Yurub.
Adeegga robotaxi waa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dhinacyo badan leh.
Daahfurka ayaa albaabka u furaya magaalooyin ka mid ah Midowga Yurub in ay qaataan qaabkan kale ee gaadiidka ah ee dhulka jabinaya.
Buffalo Automation, shirkadda sirdoonka macmalka ah ee sirta ah ee Maraykanka, iyo Shabakadda Dhaqdhaqaaqa Mustaqbalka, oo ah wadaha beddelka beddelka ee Yurub, ayaa bilaabay adeegga rootaxi -ga Yurub ee ugu horreeya oo dhammaystiran ee Nederland. Daahfurka ayaa albaabka u furaya magaalooyin ka mid ah Midowga Yurub inay qaataan qaabkan gaadiid ee kale ee dhulka ku socda.
Adeeggii robotaxi -ga ee ugu horreeyey ee Yurub oo si buuxda u madax -bannaan ayaa laga bilaabay Nederland
Adeegga robotaxi waa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dhinacyo badan leh. Waa dooni koronto oo madaxbannaan oo ku shaqaysa tamar-qorraxda oo lagu ammaani karo app-ka-wadista, laakiin ugu badnaan, waa mid ganacsi ahaan la geeyay-oo hadda sidda rakaab ku jira gaadiidka cufan ee Yurub. Daahfurka ayaa suurtogal ka dhigay suurtogalnimada kale ee ah in la isticmaalo wadaagga baabuurta korontada ku shaqeeya ee la wadaago sida gaadiid la awoodi karo oo bey'ada u habboon, waa dhab.
Adeegga doonta oo loogu magac daray “Vaar met Ferry” waxaa kabiya dawladda gobolka Nederland waxayna lacag la’aan u noqon doontaa dadka deggan illaa Oktoobar 2021. Warmond-Kagerzoom, Leiderdorp iyo koorsada golf-ka ee u dhow hadda waxay leeyihiin xiriir wanaagsan, gaar ahaan kuwa baaskiilleyda iyo dadka lugeeya, aagga madadaalada Koudenhoorn.
“Laga soo bilaabo bilowgii, yoolalka Automation -ka Buffalo waxay ahaayeen in la wanaajiyo nabadgelyada iyo in biyaha laga nadiifiyo iyada oo la adeegsanayo farsamadeenna,” ayuu sharraxayaa maamulaha guud Thiru Vikram. “Mashruucan waxaa suurta geliyey sababtoo ah bulshada maxalliga ah ee isku fikirka ah iyo hoggaamiyeyaasha ganacsatada oo u furan inay sahamiyaan qaabab gaadiid oo kale. Daahfurkaan taariikhiga ah wuxuu xoojin doonaa ballanqaadkayagii ahaa inaan dadka Koonfurta Holland siino badbaado, tamar nadiif ah oo gaadiid oo ilaalineysa jidadka tirada badan iyo kheyraadka dabiiciga ah. Daahfurka adeeggan robotaxi -ga korontada, oo ay ku shaqayso farsamadeenna Greycraft, oo ku taal webi Yurub ah ayaa u ahaa hawl xiiso leh kooxahayada hawlgalka. Waan ku faraxsanahay in saraakiisha Nederland iyo sidoo kale dadka FMN iyo NGS ay wadaagaan aragtideena oo aan sugeyno bilowga qorshaynta badan ee balliga. ”
Dawladda hoose ee Teylingen, Alderman Heleen Hooij oo u dhalatay Koonfurta Holland, oo ah hormuudka tiknoolajiyadda cagaaran, ayaa aad u xiisaynaysa faa'iidooyinka doontan. "Waa wax gaar ah in degmada Teylingen ay leedahay soo qaad: doon doon iskeed u wadata!" ayay tiri. “Way fiican tahay inaan adeegsan karno adeeggan cusub ee doonta, oo uu qorsheeyey oo hirgeliyey mid ka mid ah dadka deggan, xagaagan. Waa wax cajiib ah in ardayda ka socota Delft on de Groote Sloot laga yaabo inay u helaan goob waxbarasho mashaariicdooda. Waxaan aad ugu hanweynahay in doontaan ay u wareejin doonto dadka lugaynaya iyo kuwa baaskiilka wada sidii mashruuc tijaabo ah. Haddii ay soo baxdo in doontu ay guul tahay, waxay gacan ka geysan kartaa helitaanka waara ee u dhexeeya aagagga madadaalada ee Kagerzoom iyo Koudenhoorn. ”
Helitaanka la wadaago ee doonta korontada is-wadata waa fikradda ugu weyn ee ballanqaadka Buffalo Automation si loo hubiyo in doonnidu aysan had iyo jeer u jeedin kuwa ugu sarreeya-waxay u keentaa hab-nololeedka doonnida dadka badan, dimuqraadiyadda gaadiidka iyada oo aan loo eegin heerka qof ee maraakiibta khibrad ama awood maaliyadeed si aad u yeelato gaari, iyadoo la ilaalinayo deegaanka.
Anne Koning, oo ah Madaxa Fulinta ee Koonfurta Holland: “Sababtoo ah tillaabooyinka lagu xakameynayo coronavirus, waxaan sii kordheynaa inaan u baxno waddankeenna. Sidaas darteed, cadaadiska madadaalada ee aagaga cagaaran aad buu u kordhay. Iyada oo deeq maaliyadeed laga helay gobolka Koonfurta Holland, waxaan xaqiijineynaa xiriir dheeri ah oo lala yeesho jasiiradda Koudenhoorn. Tani waa sida aan u rajaynayno fidinta booqdayaasha si fiican, waxaanan hubin doonnaa in dadka madaddaalada ah ay sidoo kale ammaan noqon karaan xagaagan inay ku raaxaystaan ​​aaggan quruxda badan. ”